यो विजय होइन, युद्धविराम होः डा. भट्टराई – bampijhyala.com
Home > समाचार > Covid -19 > यो विजय होइन, युद्धविराम होः डा. भट्टराई
यो विजय होइन, युद्धविराम होः डा. भट्टराई
८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५२ bampijhyala
०८ मंसिर , बाँपीझ्याला, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण भएपछि विगत एक महिनादेखि आइसोलेसनमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई कोरोनामुक्त भएका छन् ।
चौथोपटकको परीक्षणपछि कोभिड-१९ परीक्षणको नतिजा ‘नेगेटिभ’ आएको उनले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिएका छन् । भट्टराईसँगै संक्रमित भएकी पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेतृ हिसिला यमी पनि कोरोनामुक्त भएको डा. भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
‘एक महिनापछि कोभिड-१९ सँग हामी दुवैले युद्धविराम गरियो र नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त गरियो,’ उनले भने ।
उनले यसलाई कोरोनासँगको युद्धविरामको संज्ञा दिएका छन् । ‘यो युद्धविराम हो, विजय हैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यो महाव्याधीलाई एक्लाएक्लै जित्न सकिन्नँ, मानवजातिले संयुक्तरूपमा जित्नुपर्छ । अत: सबैले नियमित सुरक्षा विधि जारी राखौं !’
मिस नेवाः ११४१ कु त्यात मई कृषा महर्जन ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५२
हेटौडा नेवा: गुठी खलः य न्हुलु नाय्कु भाजु अनिल खड्गी ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५२
बजेट अभावले चीनमै रोकिए २५ वटा विद्युतीय बस ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५२
विघटन गर्दा तत्कालै, अधिवेशन बोलाउँदा बिस्तारै ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५२
सरकार आफू अनुकूल सेटिङ मिलाउन प्रशासनिक अस्थिरता बढाउँदै ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५२